1. ဒေါက်တာသန်းထွန်းရဲ့စာတမ်းနဲ့ဆောင်းပါးများ စာရင်း(အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ) - ခင်မောင်ကြီး
eBook file size: 151 KB ebook pages: 23 Publication: စကောလားသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဂျာနယ်၊ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်၊ မေလ၊ အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၂၊ နှာ-၁၇၆-၁၉၂ ထိ။ Brief: ဒေါက်တာသန်းထွန်း ရေးသားပြုစုခဲ့သော စာအုပ်စာတမ်း ဆောင်းပါးများကို ...
2. သာလွန်မင်းလက်ထက် အုပ်ချုပ်ရေး - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
eBook file size: 1.37 MB ebook pages: 20 Publication: ၁၉၆၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လထုတ် မြန်မာနိုင်ငံ သုတေသနအသင်းဂျာနယ် အတွဲ ၄၉၊ အပိုင်း(၁)၌ ပါရှိသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ Brief: သာလွန်မင်းလက်ထက် အုပ်ချုပ်ရေးကို အသေးစိတ် ...
3. မြန်မာပြည်အုပ်ချုပ်ရေး - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
eBook file size: 0.97 MB ebook pages: 29 Publication: စံပယ်ဦးစာပေမှ ထုတ်ဝေသော နဝရတ်ကိုးသွယ် စာအုပ်မှ ထုတ်နုတ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ Brief: မြန်မာပြည်အုပ်ချုပ်ချုပ်ရေးအကြောင်းကို ပုဂံခေတ်မှစပြီး ကျောက်စာများနှင့်တိုက်ဆိုင် ...
4. မြန်မာ့သမိုင်းမြေပုံများ - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
... ဖော်ပြသော သဘောဖြစ်ပါသည်။ Download Related Articles ဒေါက်တာသန်းထွန်း၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့်စာစုစာရင်း ဒေါက်တာသန်းထွန်း၏စာပေဆောင်းပါးများ Dr.Than Tun's Written Facts ...
5. မြန်မာနိုင်ငံ၏လူမျိုးများ (၁၁-၁၃ ရာစုနှစ်) - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
... Download Related Articles ဒေါက်တာသန်းထွန်း၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့်စာစုစာရင်း ဒေါက်တာသန်းထွန်း၏စာပေဆောင်းပါးများ Dr.Than Tun's Written Facts ...
6. စုဖုရားလတ် - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
eBook file size: 101 KB ebook pages:3Publication: Brief: စုဖုရားလတ်အကြောင်းကို ကျမ်းကိုးနှင့်တကွ ဖော်ပြထားသည်။ Download Related Articles ဒေါက်တာသန်းထွန်း၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့်စာစုစာရင်း ...
7. ငဇင်ကာနှင့်သီတာ - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
... Articles ဒေါက်တာသန်းထွန်း၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့်စာစုစာရင်း ဒေါက်တာသန်းထွန်း၏စာပေဆောင်းပါးများ Dr.Than Tun's Written Facts ...
8. အရိုင်းနှင့်အယဉ် - ဦးသန်းထွန်း(ရွှေဘို)
... အကြောင်းများကို ယုတ္တိဗေဒကျကျ တင်ပြထားသည့်အတွက် အတွေးအခေါ် ဗဟုသုတရစေမည့်ဆောင်းပါးဖြစ်ပါ၏။ Download Related Articles ဦးသန်းထွန်း(ရွှေဘို)၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...
9. နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစုနှစ် မြန်မာ့အလားအလာ - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
သက္ကရာဇ် ၆၄၇ (၂၇ မတ်၊ ၁၂၈၆)၊ မြိက် သိုဝ်နှစ်။ ပြည် အနောက်ဖက် လှည်က္လ နှိုက် မင်ကြိ နိယ်တဝ်မူ၏။ အနန္တ ပိစည် မဟာပိုဝ် ကိုဝ် နင်တိုဝ် တရုတ်၏ အလာ အလာကို သိ ဩင်မူလိယ်ဟု စိယ်တ်မူ၏ အနန္တပိစည် မဟာပိုဝ် ...
10. မြန်မာအက္ခရာသမိုင်း နှင့် ပုဂံခေတ် မွန်စာပေရသ - ပါမောက္ခဒေါက်တာနိုင်ပန်းလှ
... မြန်မာဘုရင်များသည် မြန်မာစာကို မရေးသားနိုင်ခင်က မွန်စာကို အများဆုံး သုံးခဲ့သည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သမိုင်းပါမောက္ခဒေါက်တာသန်းထွန်းက- "နောက်မှ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ ရောက်လာသော မြန်မာက ယဉ်ကျေးမှုအရာတွင် ...
11. ကမ္ဘောဇသာဒီ - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
ကျွန်တို့ ပုန်ကန်တာကို တိုက်ခိုက်နှိမ်နင်းဖို့ ဟံသာဝတီဆင်ဖြူရှင် ဇင်းမယ်က ပြန်ခဲ့ရပေမယ့် ဇင်းမယ်အရေးဟာ ပြီးဆုံး မသွားပါ။ ဇင်းမယ်မင်းရဲ့အမတ် ဗညားလကွန်း၊ ဗညားနန်း၊ ဗညားတုရိုင်းတို့ လင်းဇင်းမင်းထံ ခိုဝင်တာကို ...
12. ကျွန်တော်လည်း အဖြေမသိပါ - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
လခြမ်းပြီ အမှတ် ၂၊ ၁၉၉၉ ရှေ့ဆုံးက ဒေါ်လှခိုင် ပြုစုတဲ့ ရခိုင်စကား အသံထွက်အညွှန်းကို တွေ့ရတော့ အရင်ငါးနှစ်က ပြင်သစ်မြန်မာ အဘိဓာန်ပြုတဲ့ ပြင်သစ်အမျိုးသမီး Madame D.Bernot က ကျွန်တော့ကို ခိုင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကို ...
13. မြန်မာရှေးဟောင်း သုတေသန (မြန်မာမြေထဲသမိုင်း) ပြဿနာ - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
နှစ်တွေ ရာစုနှစ် ထောင်စုနှစ် ကြာသထက် ကြာတော့ အကြိုသမိုင်း(Prehistory)၊ အစသမိုင်း(Protohistory)နဲ့ သမိုင်း (History)ကို မပြောတတ်တော့ဘူး။ ဒီအခါမှာ မြေကြီးထဲမှာ မြှုပ်နေတဲ့ ကျောက်လက်နက် အိုးကွဲ၊ အရိုး၊ ကျောက်ဖြစ် ...
14. ပထမ မြန်မာနိုင်ငံတော် နှင့် ပုဂံရွှေနန်းတော်ကြီး - ထူးထူးဝင်း(ရှေးဟောင်းသုတေသန)
... ဖြစ်​ပါသည်။ Download Related Articles Anawrahta of Burma - Daw Khin Myo Chit အနိရုဒ္ဓ (၁ဝ၄၄-၁ဝ၇၇) - ဒေါက်တာသန်းထွန်း ပုဂံသင်္ကြန် - ဒေါက်တာသန်းထွန်း သမုတိရာဇ်မင်း မတိုင်မီ ...
15. ပထမဦးဆုံး မြန်မာပြဇာတ်ဆရာ - ဦးဝမ်ထိန်
... ဝေဖန်ချက် - ဒေါက်တာသန်းထွန်း ...
16. Anawrahta of Burma - Daw Khin Myo Chit
... ​​ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်က လက်စွမ်းပြရေးသားထားသော စာအုပ်ကောင်း တစ်အုပ် ဖြစ်ပါသည်။ Download Related Articles အနိရုဒ္ဓ (၁ဝ၄၄-၁ဝ၇၇) - ဒေါက်တာသန်းထွန်း ပုဂံသင်္ကြန် - ဒေါက်တာသန်းထွန်း ...
17. ခေတ်ဟောင်းမြန်မာရာဇဝင် - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
18. ခေတ်သမိုင်းအခြေပြ ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်များ - သန်းထွန်း(မော်လမြိုင်)
eBook file size: 1.50 MB ebook pages: 66 Publication: 2012 ပခုက္ကူဦးအုန်းဖေဆု၊ သုတေသနစာပေဆုရရှိသော ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ ပထမအကြိမ်အဖြစ် စာပေဗိမာန်မှ ထုတ်ဝေသော စာအုပ် ဖြစ်ပါသည်။ ဤစာအုပ်ကို ကိုဇော်မျိုးဦးမှ ပေးပို့ထားခြင်း ...
19. မန်းချောင်းလွင်ပြင်မှ ပျူများ - ဇော်မျိုးဦး
20. ပါမောက္ခဒေါက်တာသန်းထွန်း M.A.,B.L.,Ph.D (Lond) အတ္ထုပ္ပတ္တိအကျဉ်း - ဦးလျံနာ (နည်းပြ၊ သမိုင်းဌာန၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်)
eBook file size: 143 KB ebook pages: 12 Publication: ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ၊ ပထမအကြိမ်ထုတ် ဗမာသမိုင်း ဟင်းလေး အမှတ်(၂)စာအုပ်၊ ​ဆရာကြီး​ ဒေါက်တာသန်းထွန်း နှစ်(၆ဝ)ပြည့် ဂုဏ်ပြုစုတမ်းများ၊ နိုင်ငံရေး လူမှုရေးနှင့်တိုင်းရင်းသားရေးရာစာတမ်းများ ...